How Men Fail ln Bed Part 2
How Men Fail In Bed Part 1
ဂုဏ်သိက္ခာစောင့်ရှောက်ခြင်း နှင့် အစ္စလာမ် (Tim Cahill)
Include Disabled In Parliament Ban Too
ဘာသာဝင်အသီးသီးနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မွတ်စလင်မ်တို့အား လမ်းညွှန်အပ်သော ပညတ်၊ ပြဌာန်းချက်
Saya Ni Ahli Umno Tapi Nak Tumpang Tanya..
U.N. committee expresses concern for Myanmar’s Muslims
မြောက်ကိုရီးယားမှ စိုးမင်းထိုက် ကုမ္ပဏီသို့ တင်ပို့သော လက်နက်အဆင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများပါ သင်္ဘောကို ရှာဖွေခဲ့ချက် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးပြောကြား
Parliament considering ban on sexist remarks during debates.
Posted: 27 Nov 2012 09:35 AM PST
"တရားသူကြီးအချို့ကို ကျွန်တော်ခန့်ရပေမယ့် သူတို့ဘယ်လို တရားစီရင်ရမယ်
ဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အမေရိကမှာဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ နေနေရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကနေ သမ္မတအထိ လူတိုင်းဟာဥပဒေအောက်မှာ တညီတညာတည်းပါပဲ။ တရားသူကြီးတစ်ဦးဟာ ကျွန်တော့်ကိုပင်ဥပဒေချိုးဖောက်တာ ဟုတ်မဟုတ်၊ ဥပဒေအထက်မှာ ရှိမရှိ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီ ပြထားတဲ့ ဥပဒေအတွက် လိုက်နာဖို့ အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိပါတယ်။"
ဒီစကားလေးဟာ အမေရိကန်သမ္မတကြီး ဘာရက်အိုဘားမားရဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။ ဒီစကားဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာအရင်ကတည်းက ယခုတိုင် အိပ်မက်တစ်ခုအဖြစ်သာ ရှိနေပါတယ်။ လက်တွေ့မမြင်ရသေးသည့်တိုင် ကြားရရုံနဲ့ ကြည်နူးစရာ စကားလေးပါ။ လက်ရှိ ကမ္ဘာကြီးမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရဲ့ အဓိကတောင်းဆိုမှုကလည်း ဒါပါပဲ။ ဒီစကားလေးက
ပြောရတာ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် လိုက်နာဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများစုဟာ
ဒီစကားကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားဟာ (Islamic Law) အစ္စလာမ့်ဥပဒေကနေပေါက်ဖွားလာပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်က အင်မတန်သြဇာညောင်းခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ့်အင်ပါယာကြီးမှာ လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အသင်ယုံမလား။ အခု တင်ပြမယ့်
ဖြစ်ရပ်လေးက အသင့်ကို အထောက်အထားပေးပါမယ်။
ဟဇရသ် အလီ ဟာ တမန်တော်မိုဟာမက် နောက်ပိုင်း အစ္စလာမ့်အင်ပါယာကြီးရဲ့ စတုတ္ထမြောက် သမ္မတကြီးပါ။
တမန်တော် မိုဟာမက်ရဲ့ သမက်လည်းဖြစ်တယ်။ တိုင်းသူပြည်သားတွေက စုပေါင်းတင်မြှောက်ထားတဲ့ သမ္မတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မုစ်လင်မ်ထု အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။ တစ်ရက် ဟဇရသ် အလီဟာ မိမိရဲ့ သံချပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ အဲ့ဒီသံချပ်အင်္ကျီကို ဂျူးလူမျိုးတစ်ဦး ၀တ်ဆင်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ မိမိအင်္ကျီကို မိမိ မှတ်မိနေတော့ ၄င်းဂျူးလူမျိုးဆီကနေ သံချပ်အင်္ကျီပြန်ပေးဖို့တောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ဂျူးလူမျိုးကလည်း မပေးနိုင်ကြောင်း သူ့အင်္ကျီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ တရားရုံးရောက်သွားတယ်။ တရားရုံးမှာ တရားသူကြီးက သူ့နေရာမှာသူထိုင်တယ်။ သမ္မတကြီး ဟဇရသ် အလီကတရားလိုနေရာမှာထိုင်ရတယ်။ ဂျူးလူမျိုးကို တရားခံနေရာမှာ ထိုင်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ တရားသူကြီးက ဟဇရသ် အလီ ကို မိမိအင်္ကျီဖြစ်ကြောင်း သက်သေထွက်ဆိုပေးမယ့်သူ ရှာခိုင်းတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ဟဇရသ် အလီက မိမိသူကောင်းပြုထားတဲ့ကျွန်နဲ့ မိမိသားကို သက်သေအဖြစ်ခေါ်လိုက်တယ်။ အင်္ကျီဆိုတော့လည်း အနီးကပ်နေတဲ့သူပဲ သတိထားမိနိုင်မှာလေ။ ဒါပေမယ့် တရားသူကြီးက ဟဇရသ် အလီဖက်မှသက်သေ မခိုင်လုံသောကြောင့် ဂျူးလူမျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ အင်္ကျီဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစ္စလာမ့်
ဥပဒေမှာ သားကအဖေဖက်ကနေ သက်သေပေးခွင့်မရှိဘူး။ အဖေရဲ့ဆန့်ကျင်ဖက် သက်သေပေးမယ်ဆိုရတယ်။ ဥပမာ အဖေက ကိစ္စတစ်ခုမှာ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် သားကလည်းအဖေအတိုင်း ဟုတ်တယ်လို့ လိုက်လံသက်သေပေးခွင့်မရှိဘူး။ တရားပြိုင်ဖက်ကနေ အဖေ့ဆန့်ကျင်ဖက် မဟုတ်ဘူးလို့ သက်သေပေးရင် ရတယ်။
နောက်ပြီး သက်သေက ၂ ဦးရှိဖို့လိုတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သားက သက်သေအဖြစ်ကနေပြုတ်သွားတယ်။ သက်သေ ၁ ယောက်သာကျန်တော့တယ်။ သမ္မတကြီး ဟဇရသ် အလီ အမှုရှုံးသွားတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ၄င်းဂျူးလူမျိုးက အင်မတန်
အံ့သြပြီး ဒီသာသနာကလွဲပြီး ဘယ်သာသနာမှန်ဦးမှာလဲဟုပြောကာ အစ္စလာမ်လက်ခံလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဟဇရသ်အလီက သမ္မတဖြစ်တယ်။ သမ္မတပါဝါနဲ့ အင်္ကျီကိူ တောင်းယူလိုက်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မတောင်းခဲ့ဘူး။ တရားရုံးရောက်တော့ သမ္မတဆိုပြီး တရားသူကြီးနေရာမှာထိုင်လို့မရဘူး။ သာမန်ပြည်သူလိုသာ ဆက်ဆံခြင်းခံရတယ်။ သမ္မတအမှုဆိုပြီး သမ္မတအိမ်မှာ သွားမစစ်ဘူး။ သမ္မတလည်း
ရုံးကိုလာရတယ်။ သမ္မတကြီး ဟဇရသ် အလီက တမန်တော် မိုဟာမက်ရဲ့ သမက်၊ သက်သေထွက်ဆိုတဲ့သားက
တမန်တော် မိုဟာမက်ရဲ့မြေး ဆိုပြီး ဘက်မလိုက်ဘူး။ ၄င်းဂျူးလူမျိုးလည်း အစ္စလာမ်သာသနာ လက်ခံလိုက်တဲ့အခါ
ဟဇရသ် အလီက သံချပ်အင်္ကျီကိုပြန်မယူတော့တဲ့အပြင် မြင်းတစ်ကောင်ပါ လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။
Source:ကုလား ကြီး shared Mahdi Light's photo.
Posted: 27 Nov 2012 07:08 AM PST
Bagi PR, dua negeri itu menjadi permata dan 'benchmark' untuk mereka berkempen. Itu jelas dan ianya memang diakui satu strategi yang mudah difahami rakyat.
Manakala bagi BN, kempen mereka sangat ketara dengan 'komisyen' untuk mendapatkan sokongan rakyat. Ini terbukti dengan segala bantuan yang mencurah-curah turun, malah bukti ini menjadi semakin jelas berdasarkan belanjawan BN baru-baru ini. Jumlahnya, silalah anda kira sendiri.
Kempen berupa 'komisyen' ini apabila diterjemahkan dalam bahasa demokrasi ia sebenarnya adalah rasuah. Namun, budaya UMNO-BN, telah menukar istilah rasuah ini menjadi 'komisyen', semuanya berlaku apabila dasar DEB diperkenal dan yang terbaru apabila rasuah kapal selam scorpene digunakan menjadi 'komisyen'.
Berbalik kepada kempen 'komisen' UMNO-BN ini, jka kita lihat gaya atau strategi Najib Razak, PM yang tidak pernah dilantik oleh rakyat, beliau dengan ketaranya menggunakan pendekatan 'mengemis'.
Sebelum ini Najib mengemis sokongan kaum Melayu dengan kempen 'komisyen'. Kemudian beliau mengemis lagi kepada anak muda dengan kempen AUKU yang bersifat kosmetik termasuk kempen komisyen dengan bantuan RM200 untuk telefon bimbit 3G.
Jika kita lihat semua senario ini, kelompok Melayu, anak muda, pertubuhan Hidraf dan India tidak dipedulikan sama sekali oleh beliau. Kaum Melayu khsusnya yang berpendapatan rendah tidak mendapat pembelaan sewajarnya. Anak muda pula disifatkan sebagai 'masalah sosial' kepada BN, pertubuhan Hindraf pula dilabel sebagai pertubuhan haram, malah tuntutan Hindraf tidak langsung dipedulikan. Begitu juga dengan kaum India, baik aspek pendidikan, perumahan dan pekerjaan, kelompok ini memang terabai sejak awal lagi.
Strategi Najib ini pastinya mendapat ilham daripada strategi kempen Barack Obama, namun sayang, mungkin beliau terlupa bahawa kempen Obama itu tidak menjadikan 'komisyen' sebagai modal memancing undi.
Kita amat bimbang, jika UMNO menang, rakyatlah yang terpaksa menanggung kos kempen 'komisyen' Najib ini. Kita amat sedar bahawa belanjawan baru-baru ini, Najib menggunakan berbilion ringgit hanya untuk 'one off' bantuan kepada rakyat.
Kos berbilion itu, jika Najib menang pastinya akan di 'claim' kembali oleh UMNO-BN menerusi pelbagai cara, antaranya saman AES, Tol dan pelaksanaan GST. Kos ini semestinya menjadi tanggungan langsung rakyat.
Sepatah kata Theodore Roosevelt, Presiden US ke-26 – "A vote is likearifle: its usefulness depends upon the character of the user." ( Undi itu seperti senapang, kegunaannya bergantung kepada karektor penggunanya)
Jika kempen komisyen Najib ini berjaya, memang rakyat akan terpesona dengan lunak kata-kata "Melayu masih pegang kuasa, UMNO akan teruskan agenda bela bla bla bla...".
Tetapi harus diingat bahawa kos kemenangan itu akan dibayar oleh rakyat, suka atau tidak, tiada lagi jalan keluar. Rakyat di sini maksudnya – kita, termasuk rakyat yang menyokong UMNO dan ahli UMNO di kampung. Masa ini tiada gunanya. Sepatah kata budak muda... " Nah hambik kau.." (Nah, ambil kau). – Roketkini
Posted: 27 Nov 2012 05:30 AM PST
Part 1 of this post was posted at 6.33p.m. today AT THIS LINK. Here's the remaining part of the post which I am sharing for laughs with no intention to offend anyone regardless of gender. Thanks to Angela who sent me this post.
Part2of How Men Fail in Bed
21. NOT COMING SOON ENOUGH. It may appear to you that humping for an hour without climaxing is the mark ofas** god, but to her it's more likely the mark ofanumb V. At least buy some intriguing wall hangings, so she has something to hold her interest while you're playing Marathon Man.
23. PERFORMING O*** S** TOO GENTLY. Don't act likeagiant cat atasaucer of milk. Get your whole mouth down there, and concentrate on gently rotating or flicking your t***** there.
24. NUDGING HER HEAD DOWN. Men persist in doing this until she's eyeball-to-p****, hoping that it will lead the mouth very swiftly there. All women hate this. It's about three steps from being dragged toacave by their hair. If you want her to use her mouth, use yours; try talking seductively to her.
25. NOT WARNING HER BEFORE YOU CLIMAX. S***m tastes like sea water mixed with egg white. Not everybody likes it. Warn her before you come so she can do what's necessary.
26. MOVING AROUND. Don't thrust. She'll do all the moving during fellatio. You just lie there. And don't grab her head.
29. ATTEMPTING A*** S** AND PRETENDING IT WAS AN ACCIDENT. This is how men earnareputation for not being able to follow directions. If you want to put it there, ask her first. And don't think that being drunk is an excuse.
34. LOOKING FOR HER PROSTATE. Read this carefully: A*** stimulation feels good for men because they haveaprostate. Women don't.
Posted: 27 Nov 2012 02:33 AM PST
I received the following post from Angela in late September and even though I have read it many times, I still haveagood laugh at this list which I am posting in two parts - just for laughs with no intention to offend anyone. The reason why I hesitated till now is because er...it isabit over the limit. Nonetheless, I have 'censored' some parts in case it offends some readers.
Part 1 features No 1-20. Part2will be posted at 9.30pm this evening.
1. NOT KISSING FIRST. Avoiding her lips and diving straight for the erogenous zones makes her feel like you're paying by the hour and trying to get your money's worth by cutting out non-essentials. A properly passionate kiss is the ultimate form of foreplay.
5. BITING HER NIPPLES. Why do men fasten ontoawoman's nipples, then clamp down like they're trying to deflate her body via her breasts? Ni**les are highly sensitive. They can't stand up to chewing. Lick and suck them gently. Flicking your tongue across them is good. Pretending they'readoggie toy isn't.
6. TWIDDLING HER N****ES. Stop doing that thing where you twiddle the n*****s between finger and thumb like you're trying to findaradio station inahilly area. Focus on the whole breasts, not just the exclamation points.
7. IGNORING THE OTHER PARTS OF HER BODY. A woman is notahighway with just three turnoffs: Breastville East and West, and the Midtown Tunnel. There are vast areas of her body which you've ignored far too often as you go bombing straight into downtown V****a. So start paying them some attention.
8. GETTING THE HAND TRAPPED. Poor manual dexterity in the underskirt region can result in tangled fingers and underpants. If you're going to be that aggressive, just ask her to take the d**n things off.
9. LEAVING HER A LITTLE PRESENT. C**dom disposal is the man's responsibility. You wore it, you store it.
10. ATTACKING THE C******S. Direct pressure is very unpleasant, so gently rotate your fingers along side.
14. BEING OBSESSED WITH THE V*****. Although most men can find the C without maps, they still believe that the v is where it's all at. No sooner is your hand down there than you're trying to stuff stolen banknotes upachimney. This is okay in principle, but if you're not careful, it can hurt - so don't get carried away. It's best to pay more attention to her C and the exterior of her V at first, then gently test the territory and see her response.
18. GOING TOO FAST. When you get to the actual situation, the worst thing you can do is pump away like an industrial power tool -she'll soon feel like an assembly-line worker made obsolete by your technology. Build up slowly, with clean, straight, regular thrusts.
Part2(No 21-40) will be posted at 9.30pm. Don't forget to swing by later in the evening.
"Kalau Langat2dapat menyelesaikan masalah inipun, ia akan sampai dua tahun akan datang (selepas ia selesai).
"Lebih baik buat kempen kurangkan air tidak ada hasil (dari kempen tiada air)," katanya.
"Jika ada RM4,000 juta untuk tambah air selangor, lebih baik kaji punca air di Selangor untuk tambah sumber air tetapi ia tidak dibuat," katanya dipetik Harakah Daily pada sesi soal jawab di Dewan Undangan Negeri Selangor (DUN) pagi semalam.
"Kita tidak buat dengan betul. Saya lebih minat buat cara ini kerana ia sesuai untuk nilai wang kita (value for money)," katanya.
"Masalah besar kepada kerajaan BN Selangor sebelum ini adalah lebih kepada 'contract management' bukannya 'resource management'.
"Mereka lebih pentingkan usaha untuk mendapatkan kontrak dari menguruskan sumber yang ada," katanya.
Posted: 27 Nov 2012 03:40 AM PST
ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်သူအချင်းချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုသေလေးစားစွာ ဂါရ၀တရားထားရှိရန် လိုအပ်ပေသည် ။
တမန်တော်မြတ်က လူမျိုးဘာသာမရွေး "ကြီးသူကိုရိုသေ ၊ ရွယ်တူကိုလေးစား ၊ ငယ်သူကိုသနား " ရမည့်အကြောင်းကို အလေးအနက် တိုက်တွန်းထားသည် ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က အစ္စလာမ်တရားကို လေးနက်စွာ ယုံကြည်ထားသူတို့အား အမှုးပြု၍ ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူထားသည် ။
အို………. သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ အမျိုးသားတို့သည် အခြားအမျိုးသား (မျိုးနွယ်စုတို့) အား သရော်သမှုမပြုရ ။ ထိုသရောက်ခြင်းခံရသော အမျိုးသားများသည် သရော်သော အမျိုးသားများထက် ပိုကောင်းမြတ်သူများ ဖြစ်ကြရ၏ ။ ထိုနည်းတူစွာ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အခြား (မျိုးနွယ်စုမှ) အမျိုးသမီးများအား သရော်သမှုမပြုရ ။ ထိုသရော်ခံရသော အမျိုးသမီးများသည်လည်း သရော်သော အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ကောင်းမြတ်သောသူများ ဖြစ်တန်ကြကုန်၏ ။ "
"ထို့အပြင် အသင်တို့သည် မိမိတို့ အချင်းချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ငြူစူစောင်းချိတ် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းလည်း မပြုလုပ်ကြကုန်လင့် ။ ထိုမှတစ်ပါး အသင်တို့သည် မိမိတို့အချင်းချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သရော်သမှုပြုကြသော အမည်နာမများဖြင့်လည်း မှည့်ခေါ်ခြင်း မပြုကြကုန်လင့် ။ "
"အစ္စလာမ်သာသနာကို လက်ခံယုံကြည်ပြီးသည့်နောက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတည်းဟူသော အမည်နာမသည် လွန်စွာဆိုးရွားလှ၏ " (ကုရ်အာန် ၄၉း၁၁)
ထိုကဲ့သို့ပင် အမျိုးသားများအား မိမိတို့၏ မျက်လွှာကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် မိမိတို့၏ ကာအိနြေ္ဒရပ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသကဲ့သို့ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်ပေသည် ။
"(အို တမန်တော်) အသင်သည် သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အား မိမိတို့၏ မျက်လွှာများကို နှိမ့်ချထားရမည်ဟူ၍ လည်းကောင်း ၊ မိမိတို့ အရှက်အင်္ဂါများကို ထိန်းသိမ်းကြရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း ပြောကြားပါလေ ။ (ကုရ်အာန်ကျမ်း ၂၄း၃၀ )
"(အို တမန်တော်) အသင်သည် သက်ဝင်ယုံကြည်သူ အမျိုးသမီးတို့အား ပြောကြားပါလေ ။ ၄င်းတို့သည် မိမိတို့၏ မျက်လွှာကို ထိန်းသိမ်းရမည် ။ ထို့အပြင် မိမိတို့၏ အရှက်အင်္ဂါကို (ကာမေသုမိစ္စာစာရ ကျူးလွန်ခြင်းမှထိန်းသိမ်းရမည် ။ )
ထိုမှတစ်ပါး ၄င်းသူမတို့သည် ပေါ်လွင်နေတတ်သော မိမိတို့၏ အလှမှအပ ကျန်အလှများကို မပေါ်ကြစေရ " (ကုရ်အာန် ၂၄း၃၁)
ဤအမိန့်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်သဖြင့် မွတ်စလင်မ် နှင့် မွတ်စလင်မ် မဟုတ်သူဟူ၍ ခွဲခြားချက်မရှိ ။ မွတ်စလင်မ် မဟုတ်သူတို့၏အရှက်သိက္ခာသည် မွတ်စလင်မ်၏ အရှက်သိက္ခာကဲ့သို့ ဖြစ်သည် ။ မွတ်စလင်မ် တို့အတွက်လည်း ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သည် ။
မွတ်စလင်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မွတ်စလင်မ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတွင် နေထိုင်သောမွတ်စလင်မ် မဟုတ်သူ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးရန် ၊ လူမှုဘ၀လုံခြုံမှုရရန် မွတ်စလင်မ်တို့အပေါ်၌ တာဝန်ရှိပါသည် ။ FB of ကုလား ကြီး
Posted: 27 Nov 2012 01:24 AM PST
Christmas At The Gardens Mall 2009
Posted: 27 Nov 2012 03:14 AM PST
Papan iklan yang tertera gambar Ketua Umum, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan slogan 'Harga Minyak Turun, Pakatan Harapan Rakyat' itu didirikan pada 20 November lalu, di Kilometer 383 Lebuh Raya Utara-Selatan, berhampiran kawasan Hentian Rawat & Rehat (R&R) Behrang.
"Saya dapati tiang papan iklan turut digergaji," jelasnya pada sidang media di ibu pejabat parti, hari ini.
"Saya memaklumkan kepada Propel Slim River dan terkejut dengan dakwaan Propel yang menyatakan pihaknya terpaksa merobohkan papan iklan tersebut atas arahan dari Setiausaha Kerajaan Negeri," kata Shahbudin.
"Laporan polis telah dibuat pada malam kejadian, 25 November, jam 1.35 pagi. Kita mahu polis siasat dan bertindak segera ke atas pencerobohan tersebut.
"Kita juga menuntut ganti rugi kepada pihak yang berkenaan antaranya, Setiausaha Kerajaan Negeri, Majlis Keselamatan Negara, Pegawai Daerah dan Yang Dipertua Majlis Daerah kerana merobohkan pagar dan papan iklan yang saya dirikan di tanah milik saya," sambung beliau.
"Apakah dengan hanya pemasangan satu papan iklan ia telah menggugat kestabilan negara?," soalnya.
"KEADILAN melihat ini adalah manifestasi dari ketakutan luar biasa pihak berkuasa Umno dalam menghadapi kebangkitan rakyat.
"Jelas, Umno BN sedang meneruskan budaya politik samseng yang kotor dan tidak bertamadun," kata Madhi.
"Sesungguhnya, pemikiran dan kematangan rakyat telahpun jauh berubah. Marilah kita bersama mengamalkan budaya politik waras dan beradab," katanya dalam kenyataan.
Posted: 27 Nov 2012 12:25 AM PST
Here's an entertaining video that features superb animation. I posted itafew years ago when it first came out and am reposting for the benefit of those who might have missed it then.
CLICK HERE to watch PIGEON IMPOSSIBLE.
Posted: 27 Nov 2012 12:16 AM PST
Posted: 26 Nov 2012 11:41 PM PST
Women's groups laud proposed changes
PETALING JAYA: Women's groups lauded the proposed
amendments to Parliament rules barring MPs from making sexist remarks,
saying these would help protect both genders.
All-Women's Action Society (Awam) president Ho Yock Lin said the Joint Action Group-Gender Equality (JAG) coalition
Posted: 26 Nov 2012 11:40 PM PST
အထူးသတိပြုရန် ။ ။ ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုသော မွတ်စလင်မ်တိုင်သည် 'နဗီကိုယ်တော်မြတ်'ဟူသော ရေးသားချက်ကိုတွေ့ရတိုင်း 'ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်းဟေးဝစလ္လာမ်' ဟု တွဲဖက် ဖတ်ရွတ်ပါရန် သတိမူစေလိုပါသည်။( တမန်တော်အပေါ်သို့ မေတ္တာပို့သခြင်း)
"အို မုအ်မင်န်၊ သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်(၏ နှစ်သက်တော်မူရန်)အလို့ငှာ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သောသူများ (သက်သေခံရာတွင်) တရားမျှတစွာ သက်သေခံသူများဖြစ်ကြလေကုန်။ ၎င်းပြင် မည်သည့်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုမဆို မုန်းတီးခြင်းသည် အသင်တို့အား တရားမျှတမှုကို မပြုပနေကြရန် လှုံ့ဆော်သည်မရှိစေရ။ အသင်တို့သည် (မည်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်မဆို) တရားမျှတကြကုန်။ ယင်းတရားမျှတမှုသည်ကား ပြစ်မှုဒုစရိုက်တို့မှ ကျဉ်ရှောင်ခြင်းနှင့် အနီးကပ်ဆုံးပင်တည်း။ ထိုမှတစ်ပါး အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ရိုကျိုးကြောက်ရွံ့ကြကုန်။ မလွဲဧကန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့ပြုသမျှကို အကြွင်းမဲ့ ကြားသိတော်မူသော အရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူချေသတည်း။" (ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ၅း၈)
အဆိုပါအာယသ်တော်သည် လူမျိုးတိုင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ ဘာသာဝင်အသီးသီးနှင့်လည်းကောင်း ဆက်ဆံရာတွင် မွတ်စလင်မ်တို့အား လမ်းညွှန်အပ်သော ပညတ်၊ ပြဌာန်းချက်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့အလျောက်လည်း နဗီကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တော်မှစ၍ အစ္စလာမ်သမိုင်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဘာသာတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် မွတ်စလင်မ်တို့သည် သဘောထားကြီးစွာထား၍ တရားမျှတပုံကို ပြောင်မြောက်စွာ သမိုင်းက သက်သေထူလျက်ရှိပေသည်။
အနောက်နိုင်ငံ ပါမောက္ခကြီး ဒန်ကန်ဂရင်းလစ်က ဖွင့်ဟ ၀န်ခံထားသည်မှာ – "The nobility and broad tolerance of Islam, which accepts as God inspired all the real religions of the world, will always beaglorious heritage for mankind. On it could in deed be builtaperfect world religoan. The Gospel of Islam." [Duncan Greenless M.A. (oxon)]
အစ္စလာမ်တရားတော်က ပြဋ္ဌာန်းပညတ်ထားသည့်အလျောက် နဗီကိုယ်တော်မြတ်သည် မက္ကာမြို့တော်တွင်လည်းကောင်း၊ မဒီနဟ်မြို့တော်တွင်လည်းကောင်း၊ ခိုင်ဘရ်တွင် လည်းကောင်း၊ လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံတို့နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြသတော်မူသော ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် တုနှိုင်းစရာမရှိသော အချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ယင်းနမူနာတော်များကို စံတင်ကာ အစဉ်တစိုက် မွတ်စလင်မ်များ ကျင့်သုံးလာပုံကို ကမ္ဘာကျော်ပညာရှိ၊ က၀ိသုတေသနပညာရှိကြီး၊ သမိုင်းကျမ်းပြုအကျော်အမော်ကြီးများက ၀န်ခံထားကြပုံမှာ – "ဒုတိယမမြောက်သာဝကကြီး အုမရ်သည် ဂျေရုစလင်ကို အောင်နိုင်သိမ်းပိုက်ပြီး စာချုပ်တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ဂျေရုစလင်ရှိ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သော တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းနှင့် ဘုရားဝတ်ပြုရာဌာအားလုံးနှင့် ၎င်းဝတ်ပြုဆောင်အားလုံးနှင့် ပက်သက်သောပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဟူသမျှကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်အာမခံသည်။ ၎င်းတို့၏ မြေယာများနှင့် ဘာသာ သာသနာရေးတွင် မည်သို့မျှ စွက်ဖက်ခြင်းမပြု၊ ၎င်းတို့၏ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အကျိုးယုတ်စေခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း လုံးဝမပြု။ ၎င်းတို့ဘာသာရေးလှူဒါန်းထားသော ၀တ္တကများကို၊ ဂုဏ်သိမ်မညှိုးစေရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည်။ ဂျေရုစလင်ပြည်သူပြည်သားများသည် ဘာသာရေးကျင့်သုံးမှုတွင် လုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပြီး ၎င်းတို့အပေါ် မည်သည့်ကျုးကျော်မှုမျိုးကိုမှ ခါင့်ပြုမည်မဟုတ်"ဟုပါရှိလေသည်။ [The Eclips of Christianity in Asia – By Lawrence]
ဤကဲ့သို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရုံသာမဟုတ်သေး၊ သာဝကကြီးသည် လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့ပုံကို အစ္စလာမ်အား အမြဲတစေအပြစ်ရှာ အကောင်းမမြင်သော 'ဆာဝီလျံမြူး'ပင်လျှင် 'The Caliphate its Rise and fall'တွင် ဂျေရုစလင်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးသော်လည်း သာဝကကြီးအုမရ်သည် နမာ့ဇ်ဝတ်ပြုချိန်ရောက်နေသဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးက ထိုနေရာတွင်ပင် နမာဇ်ဝတ်ပြုရန်ပြောလတ်သော် အုမရ်က အကယ်၍ ကျွန်ုပ် ဤနေရာတွင် ၀တ်ပြုလျှင် ကျွန်ုပ်၏လမ်းစဉ်ဟု နောင်မွတ်စလင်မ်တို့ ထင်မှတ်မှားပြီး ခရာဇ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကောင်းကို မာစ်ဂျီဒ်ဝတ်ကျောင်းတော်အဖြစ် ပြောင်းပစ်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ဤနေရာတွင် နမာဇ်ဝတ်မပြုလိုပါဟု သဘောထားကြီးကြီး အမြင်ကျယ်ကျယ် အဖြေပေးလိုက်လေသည်။
ယင်းသို့ သာဝကကြီးအုမရ်က ဘာသာရေးသဘောထားကြီးမှုကို ပြောင်မြောက်စွာ ကျင့်သုံးပြသသော ထိုသမယ၀ယ် ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံးတွင် ဘာသာရေးအယူသည်းမှု၊ ဆိုးသွမ်းသံသရာမှာ လွှမ်းမိုးလျက်ရှိပေသည်။ မွတ်စလင်မ်တို့ ဂျေရုစလင်ကို မသိမ်းပိုက်မီ ဟရ်ကလ်ဘုရင်သည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု မီးတောက်မီးလျှံကြီးကို ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်စေလျက် ရှိခဲ့ပေ၏။ ပါလက်စတိုင်း၊ ဆီးရီးယား၊ အာရှမိုင်းနားနှင့် အီဂျစ်ပြည်တို့မှ အစ္စရေးဂျူးတို့အား မောင်းနှင်ပစ်ရန်အမိန့်ထုတ်ထားခဲ့သေည်။ ဤှမျှတွင်မက ခရာဇ်ယာန်အချင်းချင်းပင်လျှင် ဟရ်ကလ်ဘုရင်ယုံကြည်သော ဂိုဏ်း – ကလ်စီဒိုနီယန် (Chalcedonian) နှင့် ဆန့်ကျင်လျှင် မညှာမတာ နှိပ်စက်ကလူပြုခြင်းခံရတော့သည်။
ဂျကိုဘီယန်ဂိုဏ်းဝင်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက ယင်းရက်စက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေးသားခဲ့သည်မှာ – "ဟရ်ကလ်ဘုရင်သည် မိမိဂိုဏ်းနှင့်လမ်းစဉ်မှတစ်ပါး အခြားဂိုဏ်းဂဏသို့လိုက်သော မည်သည့်ခရာဇ်ယာန်ကိုမဆိုး နား နှာခေါင်းများကို ဖြတ်ပစ်ရမည်။ ၎င်းတို့၏အိမ်များကို အဓမ္မ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်ဟု မိမိနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့လေသည်။ ဂျကိုဘီယန်ဂိုဏ်းဝင် ခရာဇ်ယာန်တို့အား မိမိရှေ့မှောက်သို့ ၀င်ရောက်ခွင့်လည်းမပြုသဖြင့် ၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏ နစ်နာချက်များကိုလည်း တင်ပြခွင့်မရှိပေ။ သို့ကြောင့်ပင်လျှင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှုများမှ ကယ်တင်ရန်၊ အစ္စမာအီလ်၏ အနွယ်ထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် (မုဟမ္မဒ်ကိုယ်တော်မြတ်)အား ပွင့်ရောက်စေတော်မူခဲ့၏။ မွတ်စလင်မ်တို့သည် ထိုသို့သော ဒေသများကို အောင်နိုင်သိမ်းပိုက်ပြီးသောအခါ ခရာဇ်ယာန်တို့၏ ဘာသာရေးတွင် မည်သို့မှ စွက်ဖက်ခြင်းမပြုသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရောမခရစ်ဇ်ယန်တို့၏ ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ သံကွန်ချာအောက်မှ လွတ်မြောက်ကာ အာရဗ်မွတ်စလင်မ်(များ)နှင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြော လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့် ရရှိပေတော့၏။" [Chronique De Michel Le Syrian II. 412-413]
အီဂျစ်ပြည်တွင်လည်း ဘာသာရေးညှဉ်းပန်းမှု အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်ချိန်မှာ အစ္စလာမ်က ကယ်တင်ခဲ့ပုံကို အာမေနီယံ ခရာဇ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သူ အဗူဆွာလေက "ကိုင်ဇာဘုရင်သည် မူရင်း ခရာဇ်ယာန်ဘာသာဂိုဏ်းဝင်တို့အား လွန်မင်းစွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၍ မိမိယုံကြည်သောဂိုဏ်းသို့ သွတ်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့လေသည်။ မူရင်း ခရာဇ်သာသနာတော်ကို လက်ခံထားကြသော ခရာဇ်ယာန်တို့သည် ဟရ်ကလ်နှင့် မကူကာ့စ်တို့လက်ဝယ် အပြင်းထန်ဆုံး နှိပ်စက်မှု ခံကြရကုန်၏။ ညှဉ်းပန်းမှု၊ နှိပ်စက်မှု၊ ကျူးကျော်မှုတို့ အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော အခါ မွတ်စလင်မ်လူမျိုးစုပေါ်ထွန်းလာပြီး ရောမလူမျိုးတို့၏ မာန်မာနကို ချေမှုန်း၍ အီဂျစ်ကို အောင်နိုင်သိမ်းပိုက်ကာ ဂျကိုဘီယံဂိုဏ်းဝင် ခရာဇ်ယာန်တို့အား ရောမလူမျိုးတို့၏ ကျူးကျော်စော်ကားခြင်းတို့မှ ကယ်တင်ခဲ့ပေသည်။" [The Churches And Monastrics of Egypt: P 30-31]
အီဂျစ်ကို သိမ်းပိုက်ပြီး ၎င်းတိုင်းပြည်ရှိ ဘာသာဝင်များနှင့် သဘောထားကြီးစွာထား၍ ဆက်ဆံပုံကို ဆာအာနိုလ်က ဖော်ကျူးသည်မျာ – "အီဂျစ်ကို အောင်နိုင်သိမ်းပိုက်ပြီးသောအခါ ဂါဗာနာမင်းကြီး အုမရ်ဗင်န်အာဆွိသည် တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းအား အမိန့်ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်လေသည်။ ယင်းကြေညာချက်အရ တိုင်းပြည်ပြည်သားအပေါင်းတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းတို့သည် လုံခြုံမှုအပြည့်အ၀ရှိစေရန် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်။ ၎င်းတို့ဘာသာ သာသနာရေးသည် အဟန့်အတား မည်သို့မျှမရှိစေပဲ လွတ်လပ်စေရမည်။ ၎င်းတို့၏ ဘုရားဝတ်ပြုကျောင်းများအား မည်သု့မှ နှောက်ယှက်မပြုရ။ ၎င်းတို့အား ရန်သူများက ကျူးကျော် စော်ကားသမှုပြုလာပါက ၎င်းတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် မွတ်စလင်မ်တို့၏ တာဝန်ဖြစ်သည်"ဟူသတည်း [The Preaching of Islam --- Sir Arnold]
စပိန်ပြည်တွင် ခရာဇ်ယာန်တို့ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေစဉ်အခါက ရဟူဒီဘာသာဝင် ဂျူးလူမျိုးတို့အား လွန်မင်းစွာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းကြလေသည်။ မွတ်စလင်မ်တို့ စပိန်ပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးသောအခါ ဂျူးတို့ကို ကယ်တင်ပြီး ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ခရာဇ်ယာန်တို့အားလည်း မိမိတို့ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကျင့်သုံးခွင့်နှင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပေသည်။ [The Preaching of Islam --- Sir Arnold]
ဂါဇီမူဟမ္မဒ်ဗင်န်ကာစင်၊ အိန္ဒိယပြည် သိန္ဓုနယ်ကို သိမ်းပိုက်သည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီး 'ဆာဝီလျှံမြူး'က "မွတ်စလင်မ်တို့သည် ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုးကောင်းများကို လုံးဝထိပါးခြင်း မပြုကြပေ။ ၎င်းတို့အား ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်မှုမှလည်း အဓမ္မမတားမြစ်ခဲ့ပေ။ ယဟူဒီ၊ ခရာဇ်ယန်၊ မီးကိုးကွယ်သော ပါရ်စီတို့အားလည်း မိမိတို့ဘာသာအလျောက် လွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးခွင့်ပြုထားခဲ့ပေသည်။" [Sir Willam Muir ---- The Caliphate, P. 365]
အက္ကဘာဘုရင်မင်းကြီးလက်ထက်က ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအား မြှောက်စားချီးမြှင့်ပြီး ရာဇာမာန်ဆင်းနှင့် ရာဇာတူဒါမီလ်အး အထွတ်အထိပ်ဆုံးသော ရာထူးဌာနန္တများကိုပင် အပ်ထားခဲ့ပေသည်။
အောင်ရန်ဇိဗ်ဘုရင် အုပ်စိုးသောအခါက ဗာရာဏသီတွင်း ဗြဟ္မဏအချို့ကို နှိပ်စက်သည်ဟု ကြားတော်မူသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဗာရာဏသီဘုရင်ခံ အဗူဟဆန်ထံ ချက်ချင်းပင် "အစ္စလာမ်တရားတော်အရ သူများဘာသာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို မဖျက်ဆီးရ။ ၀တ်ပြုသူများကို အနှောက်အယှက်မပြုရဟု ပြင်းထန်စွာပညတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာဝင်တိုင်းအား သဘောထားကြီးစွာ တရားမျှတစွာ ဆက်ဆံရမည်"ဟု အမိန့်ထုတ်လိုက်လေသည်။
ဤကား အခြားဘာသာဝင်များနှင့် မွတ်စလင်မ်တို့ သဘောထားကြီးစွာထား၍ တရားမျှတစွာ ဆက်ဆံခဲ့ပုံ မြောက်မြားစွာအနက်မှ အနည်းငယ်မျှကိုသာ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောဘာသာတိုင်းသည် အခြားဘာသာ သာသနာဝင်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် သဘောထား၊ တရားမျှတမှုတို့ကို အထူးရှေ့ရှုကြပေသည်။ ယင်းသို့ သဘောထားကြီးမှု၊ တရားမျှတမှုတို့ကို ဖော်ကျူးထားသော အာသောကဘုရင်ကြီး၏ ကျောက်စာ(၁၂)ကို မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာကျမ်းတွင် ဖတ်ရှုရပေရာ အတိုင်းမသိ နှစ်ထောင်း ၀မ်းမြောက်ဖြစ်ရပေသည်။ ၎င်းကျမ်း၌ အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားချက်ကို တွေ့ရပေသည်။
ဗုဒ္ဓ၏မွန်မြတ်လှသော စိတ်ထားကြီးမှု၊ စာနာမှုများကို စံနမူနာပြုပြီး ဘီစီ(၃)ရာစုနှစ်အတွင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သော အာသောက ဧကရာဇ်မင်းမြတ်ကြီးသည် ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သော အင်ပိုင်ယာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွင်းရှိ အခြားဘာသာဝင်အားလုံးတို့အား နိုင်ငံတော်ကြီးအတွင်းရှိ အခြားဘာသာဝင်အားလုံးတို့အား လေးစားချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းပြုခဲ့ပေသည်။ ယနေ့တိုင် ဖတ်ရှုနိုင်သော ကျောက်စာအဖြစ်ထုထွင်းထားခဲ့သည်။ ၎င်း၏အမိန့်တော် ရာဇသံတစ်ခုတွင် ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးက ကြေညာခဲ့သည်မှာ -
"မိမိတို့ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကိုသာ ချီးမြှင့်မြှောက်စား၍ အခြားဘာသာများကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းကို မပြုလုပ်ရုံသာမဟုတ်သေး။ ဤအကြောင်း ထိုအကြောင်းများကြောင့် အခြားဘာသာဝါဒများကို လေးစားချီးမြှင့်ရပေမည်။ ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိဘာသာကို ကြီးပွားတိုးတက်စေပြီးလျှင် အခြားဘာသာတို့အားလည်း ကူညီထောက်ပံ့လေသည်။ ဤကဲ့သို့မလုပ်မူ မိမိဘာသာ၏ သင်္ချိုင်းကို မိမိတူးရာရောက်၍ အခြားဘာသာများကိုလည်း အန္တရာယယ်ပြုရာရောက်ပေသည်။ မိမိကိုးကွယ်သ်ည့ဘာသာကိုသာ ချီးမြှင့်မြှောက်စား၍ အခြားဘာသာများကို ဖိနှိပ်ရှုံ့ချသူများသည် မိမိဘာသကိုကြည်ညိုသည့်စိတ်ဖြင့် ငါ့ဘာသာ ဂုဏ်သိမ်ထွန်းတောက်စေမည်"ဟု တွေးတောယူဆပြီးပြုလုပ်ခြင်းအမှန်ဖြစ်ပေသည်။ သို့ရာတွင် ဤကဲ့သို့ ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ၎င်း၏ ဘာသာကို ပိုမိုလေးနက်စွာအကျိုးယုတ်ပျက်ပြားစေပါသည်။
ထို့ကြောင့် သာယာညီညွတ်ခြင်းသည် မွန်မြတ်ပေသည်။ လူအပေါင်းတို့မှ မှတ်သားလိုက်နာကြလော့၊ အခြားသူများ၏ ဘာသာဝါဒများကို လေးစား ကြားနာကြကုန်လော့။ (အာသာကကျောက်စာ – ၁၂)
ဒေါက်တာ ၀ါလ်ိုလာရာဟုလာရေး What the Buddha Though ကို ဦးကိုလေး(ဇေယျာမောင်) အငြိမ်းစား ဒုတိယ အဓိပတိ မန္တလေး တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုသည့် မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာကျမ်း စာမျက်နှာ ၁၀-၁၁။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်လည်း တစ်ဘာသာနှင့်တစ်ဘာသာ လေးစားမှုရှိကြောင်းကို စာရေးဆရာမန်းတင်၊ ပါကစ္စတန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ပါကစ္စတန်မြို့တော် အစ္စလာမ်မာဘတ်၌ ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံပွဲတွင် မိန့်ခွန်းပြောသည်မှာ -
"ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီးများနဲ့ လူကြီးမင်းများခင်ဗျား၊ ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ခေတ္တခဏရောက်ဖူးတဲ့ သူတွေပါသလို လနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီး နေထိုင်ဖူးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အတော်များများ ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြို့လယ်လမ်းမကြီးတွေအနက်က တစ်လမ်းဖြစ်တဲ့ ဆူးလေဘုရားလမ်းမကြီးပေါ်လည်း ရောက်ဖူးကြမှာပဲ။ အဲဒီလမ်းမကြီးအပေါ်ကနေပြီး လမ်းရဲ့ဗဟိုမှာ တည်ရှိနေတဲ့ ရွှေရောင်တ၀င်းဝင်းနဲ့ ဆူးလေစေတီတော်ကြီးကို လှည့်မောင်းသွားတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ပေါ်ကဖြစ်စေ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ဘက်တွင် ခရာဇ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဘုရားရှိခိုးကောင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ဘက်မှာတော့ မွတ်စလင်မ်ဘာသာဝင်ရဲ့ ဗလီကြီးကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ စေတီတော်၊ ဗလီကြီးနဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတို့ရဲ့အရိပ်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရောယှက်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ စေတီတော်ကလည်း ဆည်းလည်းသံ၊ ခရာဇ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ရဲ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ခေါင်းလောင်းထိုးသံ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုရာဗလီစင်ပေါ်က ကြွေးကြော်သံများဟာလဲ တစ်သံနဲ့တစ်သံ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ရောထွေးထွက်ပေါ်လာတာကို သာယာနာပျော်ဖွယ်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ရှေးရှေးမြန်မာမင်းတွေလက်ထက်ကစပြီး ကိုးကွယ်မှုဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို ဘာပြဿနာမှ မရှိဘူး။ ယခုလည်းမရှိဘူး။ နောင်လည်းရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။" (စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်း)
အမှန်ပင် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး သဘောထားကြီးမှုသည် စံတင်လောက်အောင် ရှိခဲ့ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအင်အားဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်ပန်တိုင်းသို့ မမှိတ်မသုန်ချီတက်လျက်ရှိရာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဟန့်တားပျက်စီးစေမည့် ဘာသာရေးအမြင်ကျဉ်း၍ သွေးခွဲမှုဟူသမျှကို အမြော်အမြင်ရှိသူတိုင်း လက်ခံမည်မဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အခိုင်အမာယုံကြည်မိပေသည်။
ပြည်ထောင်စုကြီး ခိုင်မာတောင့်တင်းစွာတည်ဆောက်ရေးတွင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမှာ အဓိကကဏ္ဍတွင် ရှိနေသည်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည် အဆိုပါ လမ်းပြညွှန်ကြားချက်များကို အလေးအနက်ခံယူကာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်စေမည့် ဘာသာရေး အမြင်ကျဉ်းဖိနှိပ်မှု၊ တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်မှုတို့ကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ရမည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းရင်းသားတိုင်း၏ တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တစ်ဘာသာနှင့်တစ်ဘာသာ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ကြည်လေးစားကြ၍ သဘောထားကြီးပြီး တရားမျှမျှ ဆက်ဆံကြကာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းအားဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်ပန်းတိုင်သို့ အဟုန်ပြင်းစွာချီတက်ကြပါစို့ဟု ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
雪兰莪州州议会自上周五开始针对2013年州政府财政预算案进行委员会阶段的辩论。这次的辩论风格有所改变。有别于传统的辩论方式，即议会让所有的州议员针对某一部门进行辩论，然后再由州政府终结，这次议会将提供议员针对每一个部门的详细拨款向相关的行政议员进行盘问环节。 州议会也已经针对这项更改向朝野议员作汇报，目的是要让委员会阶段的辩论变得更为精简有效。虽然雪州国阵和马华州议员在政策辩论环节有所准备，备有演讲稿拷问政府，但是来到委员会辩论阶段时，他们表现一落千丈，这证明他们并没有针对州政府每一项预算进行研究。 马华两位州议员，即双溪比力州议员叶怡华和新古毛州议员黄冠文随有出席会议，但是迄今在委员会阶段依然金口不开，一言不发。如果雪州国阵连这个最基本的功课也做不好，那么他们要靠什么政绩争取选民支持，重赢雪州政权？ 更严重的是，雪州州议会在野党领袖沙甸更是数天缺席议会。
Posted: 26 Nov 2012 11:11 PM PST
Mengapa kita mengharapkan Tun Mahathir mengajar kita cara BN nak menang dalam PRU 13?
Bukankah PM kita Dato' Seri Najib B Tun Haji Abdul Razak?
Takkan presiden UMNO kita bodoh takder idea?
Kita ada team pejuang2 yang bijak pandai kan?
Asyik2 kena tanya Tun.
Kena mintak pendapatnya..Tun tersedak sikit punyalah kita rasa gembira.
Semua mesti highlight apa Tun Mahathir cakap...kerajaan BN dah letih dan tak bermaya ke?
Yang saya nak tahu once and for all..
Betulker Tun Mahathir telah bail out perniagaan anaknya Mirzan semasa Tun memegang jawatan PM? Dengar kata syarikat perkapalan Mirzan masa tu rugi besar sampai Mirzan nak bunuh diri.
Katanya Tun telah membayar balik loan bank yang berbillion ringgit?
Betul ker? Tun Mahathir gunakan duit dari mana?
Sekarang timbul balik nama Mirzan.
Dia mempunyai share dalam Syarikat petroleum San Miguel Corp di Philippines?
Betul ker melalui pengaruh besar Tun Mahathir, syarikat berkaitan dengan Mirzan sekarang supply minyak Petron untuk aircraft2 MAS? Bukan lagi Petronas..betul ker?
Betulker Mokzani anak Tun Mahathir mempunyai berbillion2 ringgit menerusi perniagaan2 yang telah ayahanda nya tolong akibat pengaruhnya yang kuat dalam Malaysia?
Betulker semua anak2 Tun Mahathir kaya melampau?
Kena tanya..sebab Tun Mahathir ada resipi baik nak tolong BN menang dalam PRU 13.
Kita hendak tahu sedalam mana kejujuran dia hendak menangkan BN atau hendak menutup pekung segala yang telah dilakukan dalam menunjukkan kasihsayangnya kepada keluarganya.
Kitaorang pun sayang anak2 kita, sedaramara kita dan tidak ketinggalan, kawan2 kita.
Cuma kita bukanlah nasib sebaik dan seagung Tun Mahathir.
Semoga Allah SWT tunjukkan kepada kita samada pemimpin yang kita berterusan sanjungi, betul2 telah memperjuangkan semua orang Melayu atau hanya yang terpilih sahaja.
Kita tidak mahu DSAI.. dia lagi tak guna.
Masa jadi Menteri Kewangan, dia pun kayakan keluarganya dan kroni2nya.
Sekarang dia dah bukan sebahgian dari parti UMNO kita.
Enoughlah DSAI..nak apa lagi?
Tapi kita nak tahu..Tun Mahathir pun pecah amanah jugak?
Kerajaan BN mesti berterus terang..
Adakah rahsia besar moral/penyelewengan kekuasaan menteri2 kita Tun Mahathir pegang dan kerana itu, ramai pemimpin2 tak berani berkokok?
Indirectly blackmailing each other ker?
Apalagi yang telah disorok dari kami ahli UMNO?
Macam ni teruklah parti UMNO kita..tergadailah masa depan orang Melayu kita.
Selagi kita gendung orang2 yang tidak boleh dipercayai menjuarai BN, kita rakyat akan asyik tetipu saja...tak habis2 diperbodohkan.
Rakyat keseluruhan tidak akan merasa nikmat kekayaan negara kita secara adil dan sepatutnya.
Kita taknak dengar semakin ramai anak2 Melayu menderita mendadah dan menganggur.
Kini semakin tinggi tahap jenayah yang melibatkan orang Melayu.
Peratus porak peranda bangsa kita semakin meningkat..macam mana ni?
Selamatkan lah bangsa Melayu sungguh2!
Mana2 pemimpin2 tertinggi UMNO yang tidak jujur, sila berundur.
Kita perkasakan parti UMNO baik2 dengan mereka yang lebih amanah dan ikhlas untuk bangsa dan agama kita..demi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup generasi anak cucu-cicit kita..
Janganlah pemimpin2 kita cakap berkobar2 atas pentas dan berjanji berapi2 tapi yang senang lenang, puak2 dia saja.
Sudah2lah.. mengeluh kitaorang.
Pemimpin yang kumpul harta bolehlah lari ke luar negara sekiranya negara kita menjadi kacaubilau.
Kita yang rakyat biasa nak terjah ke mana?
Kami rakyat UMNO kebanyakan putih mata, jilat jari dan ramai dah rasa macam pemintak sedekah.
Rasa macam ada kasta2 jugak.
Itu lah, kalau kita menegur terus kena cop jadi pembangkang.
Walhal kita ni tetap ahli UMNO.
Tidak ada pilihan lain..bangga dengan parti UMNO...tapi, taknaklah benda2 busuk macam ni.
Tolonglah berubah perangai...janganlah kita sendiri merosakkan UMNO.
Posted: 27 Nov 2012 12:23 AM PST
Ini tidak termasuk isu rasuah, pembaziran wang negara sebanyak RM28 bilion setahun sebagaimana diumumkan Ketua Audit Negara. kenaikan harga barang dan pelbagai lagi yang mencerminkan kelemahan pentadbiran dan pengurusan oleh pemimpin negara yang diterajui Umno Umno mendapat nafas lega apabila isu bacaan doa oleh adik kepada Mursyidul Am PAS itu, Nik Razi Nik Mat sempena majlis solat hajat di Stadium Sultan Muhammad IV pada malam 16 November lalu 'dicuba' dipasarkan dalam pemikiran orang Melayu.
…dan isu 'doa PAS' cuba dijadikan asas untuk membuktikan tanggapan tersebut.
Pokok kepada persoalan doa itu adalah "menghancurkan Umno". Umno pula adalah sebuah parti politik. Dalam isu menghancurkan Umno ini, PAS menggunakan cara doa.
Cuba kita lihat cara Umno pula untuk 'menghancurkn PAS dan PR". Mereka menggunakan seluruh kekuatan kuasa seperti media, polis, FRU, sistem perundangan, tekanan, fitnah, sekat kebebasan media, sekat ceramah,ISA dan pelbagai lagi untuk "menghancurkan' lawan politik mereka.
Umno pula menggunakan kuasa 'tindakan' dengan kekuatan kuasa, wang dan media yang dimiliki untuk 'menghancurkan PAS dan PR'. Jadi apakah bezanya?.
Lagi pun apalah kekuatan yang ada pada pembangkang selain doa dan terus berdoa. PAS yang juga sebuah parti Islam telah menggunakan 'kekuatan' mereka iaitu doa sebagai wadah kekuatan perjuangan sejak sekian lama.
Dalam konteks politik, pemimpin Umno seharusnya mencari suatu 'ikon' sebagai suatu bahan isu untuk dibawa dalam Perhimpunan Agung Umno yang berlangsung hari ini hingga Sabtu ini.
Lebih 'gayat' lagi bagi Najib apabila PRU-13 yang bakal di adakan. Justeru isu 'doa PAS' tersebut boleh dijadikan bahan pelarian untuk dijadikan topik hangat untuk dibincangkan perwakilan.
Posted: 26 Nov 2012 09:48 PM PST
U.N. committee expresses concern for Myanmar's MuslimsBy Michelle Nichols
UNITED NATIONS (Reuters) – A committee of the U.N. General Assembly expressed serious concern on Monday over violence in Myanmar between Rohingya Muslims and Buddhists and called upon the government to address reports of human rights abuses by some authorities.
At least 800,000 Muslim Rohingya live in Rakhine State along the coast of western Myanmar. But Buddhist Rakhines and other Burmese view them as illegal immigrants from neighbouring Bangladesh who deserve neither rights nor sympathy.
A Reuters investigation into the wave of sectarian assaults paintedapicture of organized attacks against the Muslim community. During an historic visit to Myanmar last week, U.S. President Barack Obama called for an end to incitement and violence.
Posted: 26 Nov 2012 09:09 PM PST
မြောက်ကိုရီးယားမှ စိုးမင်းထိုက် ကုမ္ပဏီသို့ တင်ပို့သော လက်နက်အဆင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများပါ သင်္ဘောကို ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း ဂျပန်သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်သည် ကုမ္ပဏီနှင့်သာ ဆိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရနှင့် ပတ်သတ်ခြင်း လုံးဝမရှိဟု သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးပြောကြား
Monday, 26 November 2012 17:05
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြောက်ကိုရီးယားမှ လက်နက်အဆင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာသည့် သင်္ဘောအား ဂျပန်ဆိပ်ကမ်းတွင် ရပ်နားစဉ် ၀င်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း ဂျပန်သတင်းစာ အဆာဟိရှင်ဘွန်းတွင် သတင်းဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါသတင်းပါ အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး
"မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဘယ်တော့မှ သူ့ဖဲချပ်တွေ အကုန်လှန်ပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခြားဆက်စပ် စက်ရုံတွေ အများကြီး ရှိနေပါဦးမယ်" ဟု တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒီကုန်သေတ္တာမှာ လက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့ အဓိကကျတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ပါပါတယ်။ မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအကြား စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ မပြတ်တောက်သေးပါဘူး" ဟု ရန်ကုန်ရှိ သံတမန် သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ပြောကြားထားသည်ဟုလည်း အဆိုပါသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Posted: 26 Nov 2012 09:59 PM PST
"Kerajaan perlu ada ketelusan dalam mengendalikan urusan negara kerana ia berkaitan dengan pembayaran yang dibuat kepada syarikat ini daripada wang rakyat yang dikatakan melakukan kesalahan,"katanya pada sidang media di sini, semalam.
"Bagi saya banyak perkara perlu diteliti, bagaimana syarikat yang mendaftar pada 2004 sudah tahu bahawa pada 2007, 2008 dan 2009 mendapat kontrak AES.
"Ada juga syarikat yang mendaftar pada 2009 iaitu selepas menerima kontrak ini.
Situasi ini menimbulkan kontroversi kepada projek tersebut yang menyentuh soal kepentingan rakyat," katanya.
Posted: 26 Nov 2012 08:04 PM PST
Today we are about to witnessabill that will be introduced to bar legislators from making sexist remarks during parliamentary proceedings.
This conscientization strategy includesapunitive element and is hoped to increase sensitivity to gender-insensitive remarks and behavior.
It's just rather alarming to note the need to specify sexism as offensive behavior instead of expecting MPs to know better.
Nonetheless, it isapositive step forward and is hoped to draw attention to the unacceptabiity of offensive behavior.
But in meeting such objectives, I believe that we must view policies inamore holistic manner.
As such, I applaud YB Teo Nie Ching's initiative as it brings home the plight of mothers in Malaysia.
In 2009 I gave birth to little Harith. The very same year I made an application to parliament forabreast-feeding room – for the use of all nursing mothers working in parliament.
Unfortunately, the room was not equipped withacrèche nor the necessary parliamentary standing orders that allow children in the vicinity of parliament.
I believe the first step is for all governments – state and federal – to set upabreast-feeding room fully equipped withacrèche to accommodate nursing mothers. Such showcase of political will goesalong way in sendingamessage that our government is one that is mother-friendly and concerned with nurturing the child.